Ubulili Ukwandisa amaHormone abahlinzeki bezinchungechunge ze-powder-AASraw powder
/ Imikhiqizo / Ubulili Ukwandisa amaHormoni
Ama-hormone akhuthaza ubulili afaka imikhiqizo yemvelo kanye nama-chemical compounds. Enkampanini yethu, simane sethule ezinye izinto ezibonakalayo ezibonakalayo emikethe.
Amazinga wesifazane we-estrogen, i-progesterone, ne-testosterone ngokwemvelo ngokwehla ngokweminyaka, ikakhulukazi ngesikhathi nangemva kokuya esikhathini. Thola izindlela zokugcina ucansi lwakho luqhume, ngisho namazinga akho e-hormone aphansi. Futhi, kwamadoda athile, kanye nokukhula kweminyaka, ukushayela ucansi kuyahla. Futhi, ikakhulukazi, amanye amadoda anenkinga e-erectile ye-dysfunctial. Ukuze usebenzise imithi yokwenza ngcono ngokocansi, ubasize ukuba bajabulele impilo, noma impilo engcono yocansi.
Ukungasebenzi kahle kwe-Erectile (ukungabi namandla) ukungakwazi ukuthola nokugcina u-erection eqinile ngokwanele kocansi.
Ukuba nenkinga yokulungisa ngezikhathi ezithile akusona isizathu sokukhathazeka. Uma ukungasebenzi kahle kwe-erectile kuyinkinga eqhubekayo, noma kunjalo, kungabangela ukucindezeleka, kuthinte ukuzethemba kwakho futhi kubambe iqhaza ezinkingeni zobudlelwane. Izinkinga zokuthola noma ukugcina i-erection nazo zingabonakalisa isimo sempilo esiyinkimbinkimbi esidinga ukwelashwa kanye nesici esingozini yesifo senhliziyo.
Ukwelashwa kuncike ekubambeni.
Ukuzivocavoca, ikakhulukazi ukuzivocavoca kwe-aerobic phakathi ne-midlife kuyasebenza ekuvimbeleni i-ED; ukuzivocavoca njengoba ukwelashwa kungaphansi kophenyo. Ukubhema ugwayi, ukuqeda kuholela ekuthuthukiseni okukhulu.
I-pharmacotherapy yomlomo kanye namadivaysi e-vacuum erection kukhona izindlela zokwelapha zokuqala, okulandelwa ukujova kwezidakamizwa ngaphakathi kwepeni, kanye nezimpande zepenile.
I-PDE5 inhibitors sildenafil (i-Viagra), i-vardenafil (i-Levitra) ne-tadalafil (i-Cialis) yizidakamizwa zemithi esetshenziswa ngomlomo.
Ukhilimu ohlanganisa i-alprostadil ne-enhanme enhancer DDAIP ivunyelwe eCanada njengokwelashwa kokuqala kwe-erectile ukungasebenzi.
Enye yale mithi elandelayo ingase igwetshwe ipeni: i-papaverine, i-phentolamine, ne-prostaglandin E1.
I-Sildenafil / Sildenafil Citrate (viagra) yindlela yokwelapha evamile ye-ED. Kukusiza ukuba ubenzima uma isikhathi sikhona. Akufanele uhambe ukusuka ku-6 kuze kube phakathi kwamabili nje ngokukuthatha.
I-Tadalafil / Cialis imithi ephumelelayo yobulili ephumelelayo ekusebenzeni okusheshayo, isilinganiso esingaphansi, isikhathi eside.
Ngaphandle kwalabo, i-Dapoxetine HCL ikholelwa ukuthi isiza owesilisa ukuba ahlale isikhathi eside isikhathi sokukwazi ikhono lobulili, uma esexutshwe nge-cialis noma nge-viagra.
Ngemuva kokuthatha ithebulethi eyodwa, ezinye izithako ezisebenzayo ze-CIALIS zihlala emzimbeni wakho ngezinsuku ezingu-2 ezingaphezulu. Isithako esisebenzayo singasala isikhathi eside uma unenkinga nezinso zakho noma isibindi, noma uthatha ezinye izidakamizwa.
Iminye Imithi Ingayithinta CIALIS?
Tshela umhlinzeki wakho wezempilo mayelana nayo yonke imithi oyithathayo, ikakhulukazi:
imithi ebizwa ngokuthi "nitrate" ejwayele ukuchazwa ubuhlungu besifuba
imithi ebizwa ngokuthi i-guanylate cyclase stimulators esetshenziselwa ukwelapha i-pulmonary arterial hypertension ne-hypertension engapheli-thromboembolic
ama-alpha-blockers ngokuvamile anqunyelwe izinkinga ze-prostate
imithi ye-HIV noma ezinye izinhlobo zemithi ye-antifungal yomlomo
ezinye izinhlobo zama-antibiotic afana ne-clarithromycin, i-telithromycin, i-erythromycin (amagama amabizo ambalwa akhona, sicela uxhumane nomhlinzeki wakho wezempilo ukuze anqume ukuthi uthatha le mithi)
eminye imithi noma imithi yokwelapha erectile (ED)
I-CIALIS nayo idayiswa njenge-ADCIRCA yokwelashwa kwe-pulmonary blood pressure. Ungathathi kokubili i-CIALIS ne-ADCIRCA. Ungathathi i-sildenafil citrate no-CIALIS.
Ukubonisa 1-8 of 12 imiphumela
I-cyproterone i-Acetate powder
I-JinYang Alkali (Jinyang Base) powder